Myanmar Distillery Changes Name to Grand Royal Group International | Myanmar Business Today
Home Business Local Myanmar Distillery Changes Name to Grand Royal Group International
Leading spirits maker Myanmar Distillery has changed its name to Grand Royal Group International. Ownership, investment and staff structures remain unchanged.
“The renaming strategy is aimed at strengthening our corporate identity and to ensure that our stakeholders are served better under one common name,” said CEO Sanjay Gupta inapress release announcing the change of name and corporate logo.
The move is aimed at ensuringacloser linkage with the Grand Royal brand, listed as the 38th fastest-growing spirits brand for the first half of 2019 in the International Wine and Spirt Research (IWSR)’s drinks market analysis.
Founded in 1995 andamember of the Singapore-listed ThaiBev Group since 2017, the company isamarket leader in various segments withaportfolio of products that have won more than 70 international awards. Recently certified as “A Great Place to Work” by the Great Place to Work Institute, it sets its sights on becoming one of the most admired consumer product companies in Myanmar.
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်း ယမကာထုတ်လုပ် ရေးလုပ်ငန်း Myanmar Distillery
သည် ယင်း၏နာမည်ကို Grand Royal Group International
အဖြစ် နာမည်ပြောင်းလိုက် သည်။ သို့သော် ကုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံမှာ မူလ အတိုင်း ဆက်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
”နာမည်ပြောင်းရတဲ့ မဟာဗျူဟာကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကော်ပိုရိတ်အမှတ်အသားကို အားကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရွယ် ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်တွေကိုလည်း နာမည် တစ်ခုတည်းအောက်မှာ ပိုပြီးကောင်းမွန် အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့လည်း ရည်ရွယ် ပါတယ်”ဟု CEO ဖြစ်သူ Sanjay Gupta
က သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲတွင် ပြောဆို ထားသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာ Grand Royal အမှတ်တံဆိတ်နှင့် ပိုမို ရင်းနှီးစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ အဆိုပါ အမှတ်တံဆိပ် မှာ International Wine and Spirit Research (IWSR)
၏ အဖျော်ယမကာဈေး ကွက်လေ့လာဆန်းစစ်ချက်တွင် ၃၈ ခု မြောက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအမြန်ဆုံး ယမကာ လုပ်ငန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခံရသည်။
Previous articleCBM Issues Rules for Cross-Border Money Transfers
Next articleOnly 19 Companies in Kachin State Registered for Investment Privileges